Nanambara i Pass France ny pass COVID ho an'ny bar, trano fisakafoanana, teatra ary fiaran-dalamby, jab tsy maintsy atao ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Nanambara i Pass France ny pass COVID ho an'ny bar, trano fisakafoanana, teatra ary fiaran-dalamby, jab tsy maintsy atao ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny filoha frantsay Emmanuel Macron
Ny vaksinin'ny COVID-19 ho an'ny besinimaro dia tsy ho voatery atsy ho atsy, saingy tsy nesorin'i Macron io safidy io.
Manodidina ny 36% amin'ireo olona 67 tapitrisa ao Frantsa no vita vaksiny fanoherana ny COVID-19.
Ny vaksiny COVID-19 dia tsy maintsy atao ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana any Frantsa.
Tsy hanome fizahana COVID-19 maimaimpoana intsony ny governemanta frantsay manomboka amin'ny fararano.
Tao amin'ny lahateny tamin'ny fahitalavitra androany, ny filoha frantsay Emmanuel Macron dia nampandre ny olom-pirenena frantsay fa tsy maintsy hatao vaksiny izy ireo hahafahany mitsidika trano fisotroana, trano fisakafoanana, teatra, sinema ary fiaran-dalamby. Covid-19 Tsy maintsy atao ny mitifitra an'ireo mpiasan'ny fahasalamana frantsay
Araka ny voalazan'i Macron, ny vaksinin'ny COVID-19 dia tsy maintsy atao ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana any Frantsa, ary ny «pass de fahasalamana» izay manaporofo ny toeran'ny vaksiny, na fitsapana ratsy ho an'ny coronavirus, dia ilaina hiondrana lamasinina na hitsidihana ny ankamaroan'ny toerana ampahibemaso manomboka amin'ny Aogositra. Ny olom-pirenena frantsay sy ny mponina rehetra mihoatra ny 12 taona dia mila pass.
"Hitarinay araka izay azo atao ny fizarana fahasalamana mba hanosehana ny ankamaroanareo hanao vaksiny," hoy i Macron.
Ny vaksinin'ny COVID-19 ho an'ny besinimaro dia tsy ho voatery atsy ho atsy, saingy tsy nesorin'i Macron io safidy io. Raha tsy mahatratra ny tahan'ny fampidirana otrikaina dia nampitandrina ny filoha fa "hametraka ny fanontaniana momba ny vaksiny tsy maintsy atao ho an'ny frantsay rehetra."
Ho fanampin'izany, na dia ho ampy aza ny fitsapana PCR ratsy hahazoana fahazoana «passas ara-pahasalamana», dia nilaza i Macron fa tsy hanome fizahana COVID-19 maimaimpoana intsony ny governemanta manomboka amin'ny fararano.
Manodidina ny 36% amin'ireo olona 67 tapitrisa ao Frantsa no vita vaksiny fanoherana ny COVID-19, saingy ny isan'ireo tranga vaovao dia efa nitombo hatrany hatrany ny fiandohan'ny volana jolay, nateraky ny areti-mifindra. Delta variant an'ny COVID-19.
Manana hetsika fanoherana vaksinim-panafody “miorim-paka” i Frantsa izay mety tsy ho faly amin'ny fizotran'ny vaksiny mahery setra an'i Macron.